မီးပြတိုက် | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 14/07/2013
Posted in: ဆောင်းပါး.	Tagged: ဆောင်းပါ, နှုတ်ကပတ်တော်.	Leaveacomment
ယနေ့ ကမ္ဘာ့ သတင်းကို နားထောင် ကြည့်မည်ဆို ပါက ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းတွင် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ အဓိကရုဏ်းများ၊ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ၊ စစ်ပွဲများ၊ လူကုန် ကူးမှု၊ မူးယစ် ဆေးဝါး ပြဿနာ၊ စီးပွားရေး ကျဆင်းမှု၊ ဒုစရိုက် ရာဇဝတ် ထူပြောမှု၊ လင်မယား ကွာရှင်းမှု၊ ရင် သွေးငယ် စွန့်ပစ်မှု၊ သဘာဝ ကပ်ဘေးနှင့် ရောဂါ ဆိုးကြီးများ စသည့် အနိဋ္ဌာန်ရုံ သတင်းများက လွမ်းမိုး နေရာ ယူထားသည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ လူသားတို့ အတွက် မျှော်လင့်ချက်မှာ ယဲ့ယဲ့ ကလေး သာရှိပြီး ခိုကိုးရာ မဲ့နေသလို ခံစား နေကြ သည်။
ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် ဘုရား သခင်သည်လူသားများကို ဂရုမစိုက်တော့ပြီ လော။ လူသားများကို လျစ်လျူရှုနေပြီလော။ ဘုရားရှင်သည် လူသားများအား ဆင်းရဲ ဒုက္ခနှင့်ဆိုး သွမ်းမိုက်မဲမှုကို အဘယ်ကြောင့် ခွင့်ပြုထားသနည်း ဟူသောမေးခွန်းမှာ ဒွိဟဖြစ်စရာပေါ်လာပါသည်။
ဆရာကြီး ဘွန်ကီက ယာဉ်ထိန်းရဲများ အားမေးခွန်း တစ်ခုမေး ခဲ့ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ယာဉ်ထိန်းရဲ များသည် ယာဉ်တိုက်မှုကို ခွင့်ပြုထား ရသနည်းဟုမေးသောအခါ ယာဉ်ထိန်း ရဲများက ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများကို အတိအ ကျထုတ်ပြန် ထားပြီသားဖြစ်သည်။ အဆိုပါစည်း ကမ်းများကို လိုက်နာလျှင် မတော် တဆယာဉ်တိုက် မှုများဖြစ်ပွားမည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ စည်းကမ်းကို မလိုက်နာဘဲ၊ မဆင်မခြင်နမော်နမဲ့ကျူး လွန် ဖေါက်ဖျက်ပါက ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီး မလို လား အပ်သောဆိုးကျိုး ပြဿနာများ၊ အနိဋ္ဌာန်ရုံများကို ကြုံရမည်ဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြပါသည်။
ထိုနည်းတူ ဘုရားရှင်သည် လူသားများ လိုက်နာရန်စည်းကမ်းပညတ်များကို ကြိုတင်ပြ ဋ္ဌာန်းပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ နှုတ်ကပတ် တော်တည်းဟူသော သမ္မာကျမ်းစာ ပင်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ကမ္ဘာ့ လူသားများ ဆိုးသွမ်း မိုက်မဲပြီး ဆင်းရဲ ဒုက္ခနှင့် အနိဋ္ဌာရုံများ ကြုံတွေ့နေ ရခြင်းမှာ ဧဒင်ဥ ယျာဉ်မှစ၍ ယနေ့ထိတိုင် လူသားတို့သည် နှုတ် ကပတ်တော် ကို ကျောခိုင်းကာ မှားယွင်း သောရွေး ချယ်အသက်ရှင် မှုကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်သည် လူသားများ ကို မျက်နှာလွှဲ စွန့်ပစ် ထားခြင်းမရှိပေ။ ထာဝရဘုရားနှင့် သဏ္ဌာန်တူ ဖန်ဆင်းခြင်း ခံရသောလူသား များသည် တန်ဖိုးကြီး လှပါသည်။ ဆားဗီးယားတို့ ၏ ပစ်ချခြင်း ခံရသော အမေရိကန် လေတပ်ဗိုလ်ကြီး စတော့အိုဂရက်သည် တောထဲ၌ ခြောက်ရက်ကြာ ပုန်းအောင်း နေရာမှ သူ့အား ကယ်တင်ရန် စစ်ဆင် ရေးတွင် အမေရိကန် စစ်တပ်က အသုံးပြုခဲ့သော လေယာဉ်နှင့် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ် မှာ ဒေါ်လာ သန်းခြောက်ထောင် ရှိကြောင်း သိရ သည်။ စတော့အို ဂရက်ဒီ သည် ဒေါ်လာသန်း ခြောက်ထောင်တန်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ခရစ်တော်က လူတစ်ဦး၏တန်ဖိုးသည် စကြဝဠာထက် မက တန်ဖိုးရှိပြီး အလေးအနက် ထားကြောင်း သွန် သင်ခဲ့သည်(မဿဲ ၂၆း၁၆)။ ထို့ကြောင့် ခရစ် တော်သည် လူသားများ ပြည့်စုံ ကြွယ်ဝသောအ သက်တာရရှိနိုင်ရန်အတွက် အပြစ်ငရဲမှ ရွေးနုတ် ကယ်တင် ပေးခဲ့ပါသည်။
အမှန်စင်စစ် ဘုရားသခင်သည် လူတစ် ဦးစီ၏ဆံပင်ကို အကုန်အစင်ရေတွက်လျက်ရှိပါ သည်။ လူတစ်ဦးစီ၏ထွက်သက်ဝင်သက်သည် ဘုရားသခင်၏ လက်တော်ထဲ တွင် ပါရှိပါ သည်။ ဘုရားသခင် အခွင့် မပေးလျှင် စာငှက် တစ်ကောင် မျှ မြေပေါ်မကျနိုင်ပါ။ ကပ်ကမ္ဘာ ကုန်သည့် တိုင် အောင် ယုံကြည်သူများနှင့်အတူ ရှိနေမည် ဖြစ် ကြောင်း ကတိပေး ထားပါသည်။
တစ်နေ့တွင် ထမင်းချက်နေစဉ် မီးပျက်သွား သည်။ မီးပြန်မလာသဖြင့် ထမင်းမှာမနူးမနပ်ဖြစ် ပြီး စား၍မရတော့ပါ။ မီးသွေးမွှေးပြီး ပြန်ချက်ရပါ သည်။ ယနေ့ ယုံကြည်သူ အသီးသီးသည် အသက် နှင့်အလင်းတည်းဟူသော နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် မပြတ်ဆက်သွယ်ရန် လိုပါသည်။ အလင်းပေး သောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သာ မိမိအသက် တာကို ဘေးကင်းစွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်မည်ဖြစ် သည်။ အသက်တည်းဟူသောနှုတ်ကပတ်တော် အားဖြင့်သာ အန္တရာယ်အပေါင်းကို အောင်မြင် ကျော်လွှားနိုင် မည်ဖြစ်သည်(ဆာလံ ၁၁၉း၁ဝ၅၊ သု ၁း၃၃)။ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမလိုက်နာဘဲ ကျောခိုင်းအသက်ရှင်ပါက မီးပျက်သွားစဉ်က ထမင်းပေါင်းအိုးထဲမှ ထမင်းကဲ့သို့ စားရန် မကောင်း တော့ဘဲ ပျက်စီးခြင်းအားအခြေအနေမျိုးနှင့် ရင် ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံမှအငံဓါတ် ကင်းမဲ့သောဆားခဲများကို လမ်းခင်း ကျောက်များ အဖြင့်သာ အသုံးပြုခြင်းခံရသည်။
ငါနှင့်ကွာလျှင် သင်တို့သည် အဘယ် အမှုကိုမျှ မတတ်နိုင်ကြ(ယော ၁၅း၅)။ လူသား တစ်ဦးစီ၏အစဉ်းလဲဆုံးအရာမှာ စိတ်နှလုံးပင် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့လူသားများ ဆိုးသွမ်း မိုက်မဲနေရ ခြင်းမှာ စိတ်နှလုံးကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ လူသား တစ်ဦးစီ၏စိတ်နှလုံးကို ထိန်းချုပ်ပဲ့ပြင်လမ်းပြရန် ဝိညာဉ်သည် နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ပြည့်ရမည်။ တစ်နည်း အားဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာရှင်သန်ရန်အတွက် အစားအစာမှီဝဲနေရသလို ဝိညာဉ်ရှင်သန်နိုးကြား ရန်အတွက် နှုတ်ကပတ်တော်ကို မှီဝဲရမည်။ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း အာဗြဟံလင်းကွန်း က သမ္မာကျမ်းစာမရှိလျှင် အမှားအမှန်ကိုသိနိုင်မည် မဟုတ်၊ လူကိုပေးသနားတော်မူသောဘုရား သခင်၏ကျေးဇူးတော်ထဲက အကောင်းဆုံး၊ အ မွန်မြတ်ဆုံးအရာမှာ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ် ကြောင်း ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။
စာရေးဆရာကြီး ဝီလျံရှိတ်စပီးယားက စာတန်နတ်ဆိုးပင်လျှင် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်အ တွက် ကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုရွတ်ပြနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ယေရှုစုံစမ်းခံခဲ့ရစဉ်က စာတန်ကို နှုတ်ကပတ်တော် လက်နက်အားဖြင့်သာ ကိုင်စွဲ အနိုင်ယူခဲ့သည်မှာ ဆင်ခြင်စရာပင်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူတို့၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် နှုတ်ကပတ် တော်မရှိပါက၊ နှုတ်ကပတ် တော်အတိုင်း အသက် မရှင်ပါက စာတန်ပစ်ခတ်သောမီးစက်လက်နက် အောက်တွင် မရှုမလှအရေးနိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ စာ တန်သည် ဟောက်သော ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ အဘယ် သူအား မျိုရမည်ကို လှည့်လည်ရှာဖွေလျက်နေပါ သည်(၁ပေ ၅း၈ဝ)။
ယနေ့ ယုံကြည်သူများသည် နှုတ်က ပတ်တော်ဖတ်ရှုရန် အချိန်မပေးနိုင်ကြ။ စာတန် က ယုံကြည်သူတို့၏စိတ်နှလုံးနှင့်အချိန်ကို ခိုးယူ နေ၏။ အမျိုးသမီးများက ကိုးရီးယား ဇာတ်လမ်း တွဲတွင် မျောပါနေကြသည်။ အမျိုးသားများက ညသန်းခေါင်ကျော်သော ဘောလုံးပွဲများကို အချိန် ပေးနိုင်သလောက် ကျမ်းစာ ဖတ်ရန်အချိန် မပေး နိုင်ကြ။ လူငယ်များက ကျမ်းစာဖတ်ရန်ထက် ဂျာ နယ်၊ ဝတ္ထု၊ ဇာတ်လမ်းတွဲများကိုသာ နှစ်ခြိုက်စွဲ လမ်းနေကြသည်။ စာတန်သည် ယုံကြည်သူများ ဘုရားရှင်နှင့် မိတ်သဟာယ ဖွဲ့ရန်ထက် အခြား သောကိစ္စများ၌သာ အချိန်ကုန်နေစေသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှသူများသည်လည်း အ သက်တာပြောင်းလဲစေသောနှုတ်ကပတ်တော် ထက် အသင်းသားများ အကြိုက် ပုံပြင်နှင့် ဟာသ များကိုသာအသား ပေးဝေငှကြသည်။ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးမပါရှိသဖြင့် အသင်း သားများနှလုံးသားများ ပြောင်းလဲမှု မရှိဘဲ မပူ မအေး နွေးနေကြသည်။
လူသားများသည် ဤလောက၏ဧည့် သည်များပင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားခရီးသွားများ သည် ခရီးသွားမည်ဆိုပါက ဧည့်လမ်းညွှန်၊ လမ်း ပြသူတို့ လိုအပ်ပါသည်။ လောက ဧည့်သည် ဖြစ် သောယုံကြည် သူများသည်လည်း ဧည့်လမ်းညွှန့် (သို့)လမ်းပြသူဖြစ်သည့်နှုတ်ကပတ်တော်အား ဖြင့်သာ မိမိ အသက်တာ ပန်းတိုင်ကိုရောက် ရှိနိုင်ပါ သည်။
ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝမှစ၍ လူသားများ အတွက် ထားရှိသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယ ဖွဲ့ခြင်းနှင့် ဘုရားရှင် ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို နာခံ လိုက်လျှောက်ရန် ဖြစ် သည်။ နတ်ဆိုးများ သည်ပင်လျှင် ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်သော်လည်း နာခံ လိုက်လျှောက်ခြင်းမရှိ ပေ(ယာ ၂း၁၉)။ ခရစ်တော် တည်းဟူသောနှုတ်က ပတ်တော်ကို ယုံကြည်နာခံမှသာ ပြည့်စြုံ<ွကယ်ဝ သောအက်တာကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ် တော်ကို နေ့ညမပြတ်ဖတ်ရှုပြီး နာခံလိုက်လျှောက် မှသာ အောင်မြင်သော အသက်တာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် မည်ဖြစ်သည်။
← ခရစ်တော်အတွက်သာ မဟုတ်ခဲ့ရင်
ဘုရားသခင် ကောင်းမြတ်သည် →